Inkqubo yolawulo lomgangatho-SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
I-XY Tower ithembise ukunikezela ngenkonzo yobungcali kubathengi bethu.Inkqubo yolawulo lomgangatho yenye yemigaqo-nkqubo engundoqo ye-XY Tower.Ukuze kuqhutywe inkqubo yolawulo loMgangatho, i-XY Tower iqinisekisa ukuba zonke izixhobo eziyimfuneko kunye noqeqesho ziyabonelelwa kwaye bonke abaqeshwa bathatha inxaxheba ebonakalayo ekuphumezeni iNkqubo yoLawulo loMgangatho.
Kwi-XY Tower, umgangatho luhambo kwaye ayisiyiyo indawo ekuyiwa kuyo.Ke ngoko, injongo yethu kukugcina abathengi bethu ngokuvelisa izixhobo zomhlaba ezisemgangathweni, iinqaba zothumelo, iinqaba ze-telecom, izakhiwo zesikhululo kunye nezixhobo zentsimbi ngamaxabiso akhuphisanayo kunye nokuqinisekisa ukuhanjiswa kwangexesha.
Ukuba yinxalenye yenkqubo yokuvelisa, umgangatho uqinisekiswa ngokwemigangatho ye-ISO.I-XY Tower Quality Management System iqinisekisiwe kwi-ISO 9001: 2015, ISO14001, ISO451001, ISO1461.
Ulawulo lwe-XY Tower luzibophelele ekusebenzeni yonke inkalo yeshishini kuloo migangatho ibonelela ngeyona nkonzo ilungileyo kubo bonke abathengi.Oku kuxhaswa yindlela yokulawula eqhubekayo ekhuthaza inkcubeko esemgangathweni kuyo yonke inkampani.
Abaphathi bazibophelele ekuqhubekeni bephucula uLawulo loMgangatho.Oku kukuqinisekisa ukuba inkampani isebenza ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo kwaye ihlangabezana neemfuno zabathengi bethu.
I-QA / QC ilawulwa ngabahloli abaqeqeshwe kakuhle abasebenzisa izixhobo zokuvavanya zanamhlanje ukuqinisekisa imigangatho ephezulu yomgangatho kunye nokugqiba kakuhle.Eli sebe likhokelwa yiCEO yethu ngqo.
Umsebenzi we-QA/QC uqinisekisa ukuba zonke izinto ezisetyenziswayo zihambelana nemigangatho ye-ISO okanye imilinganiselo efunekayo efunekayo ngabathengi.Imisebenzi yolawulo lomgangatho iqala ukusuka kwimathiriyeli ekrwada ngokuyilwa kunye nokugalelwa intsimbi kude kube ukuthunyelwa kokugqibela.Kwaye yonke imisebenzi yokuhlola iya kubhalwa ngokufanelekileyo kwi-Fabrication Checklist.
I-QA / QC yindlela nje yokugcina umgangatho.Ukuseka inkcubeko esemgangathweni kuyo yonke inkampani kubaluleke kakhulu.Abaphathi bakholelwa ukuba umgangatho wemveliso awuxhomekeke kwisebe le-QA/QC, umiselwa ngabo bonke abasebenzi.Yiyo loo nto bonke abasebenzi besazi ngokuzibophelela kwabalawuli kulo mgaqo-nkqubo ngokukodwa kunye nomgangatho jikelele kwaye bayakhuthazwa ukuba babonise inkxaso yabo kwinkqubo ngokuthatha inxaxheba ngokuqhubekayo.
Uvavanyo loxinzelelo lwe Tower
Uvavanyo loxinzelelo lweTower yindlela yokugcina umgangatho, injongo yovavanyo kukuseka inkqubo yovavanyo loxinzelelo ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko lomgangatho wemveliso ngoxinzelelo olufunyenwe ngexesha lokusetyenziswa okuqhelekileyo okanye ukusetyenziswa ngokufanelekileyo okulindelweyo, umonakalo kunye nokusetyenziswa kakubi kwemveliso.
Uvavanyo lokhuseleko lwenqaba yentsimbi luvavanyo olubanzi lokhuseleko lwenqaba yentsimbi ngophando, ukufumanisa, uvavanyo, ukubala kunye nohlalutyo ngokwemigaqo yoyilo lwangoku.Ngovavanyo, sinokufumanisa amakhonkco abuthathaka kwaye siveze iingozi ezifihliweyo, ukuze sithathe amanyathelo ahambelanayo okuqinisekisa ukhuseleko lokusetyenziswa kwenqaba.